← भारतीय कम्पनीको नेपालमा अत्याचारको यो नमुना , बजारबाट फिर्ता आएको रियल जुसमा नयाँ उत्पादन मिति टाँस्ने गरिएको भेटियो
संसारका १० धनी व्यक्तिहरू →
पढालेखा, देशदुनियाँ बझेकी, सामाजसेवीको परचिय भएकी उनकी श्रीमती रूपसौन्दर्यमा पनि कम छैनन्। तर, उनको दैनिकी श्रीमान्सँग कुनै दृष्टिले मेल खाँदैन। २८ वषर्ीया श्रीमती रक्सी नपिएर घर आएको दिनै हुन्न। डान्स बार, डिस्को थेक, राती अबेलासम्मको पार्टी उनको दैनिकी हो। कुलपूजा, भोजभतेर वा यस्तै पारविारकि जमघटमा सपत्नी जान सक्दैनन् राणा। रक्सी पिएर दिनदिनै आलोचना गर्ने र ‘कुहिएका’ भन्दै आफ्ना पितापुर्खासमेतलाई गाली गर्ने उनको स्वभावबाट राणा दिक्क छन्। भन्छन्, “हरेक कुरामा आलोचना र आक्षेपका शब्द बर्साउँछिन्। हरेक कदममा नकारात्मक टिप्पणीबाट कुरा सुरु गर्छिन्।”
स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेकी श्रीमती श्रीमान्को मोबाइलमा ‘मेसेज’ वा फोन आएको सुनेकै भरमा ‘गर्लप|mेन्ड’ भन्दै आक्षेप लगाउने, रूप-सौन्दर्यको घमण्ड गर्ने, देशविदेश घुम्ने क्रममा लामो समय सम्पर्कविहीन बस्ने, खर्च गर्न पैसा मागिरहने कारणले राणा हैरान भएका हुन्। श्रीमती राजनीति, प्रशासन र अन्य क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूसँग परििचत भएकाले राणा अड्डा-अदालत पुगे पनि आफ्नो पक्षमा कसैले बोल्ने वा निर्णय दिनेमा आशावादी छैनन्। “म भने चर्को स्वरमा बोल्नसमेत सक्दिनँ। बढी कुरा गरे मुद्दा हालिदिने धम्की पाइन्छ,” उनी हैरानी सुनाउँछन्।
दुई वर्षसम्म दाम्पत्य जीवन राम्रै चलाएका राणा अहिले पारविारकि समस्याकै कारण व्यापारमा पूरै ध्यान लगाउन नसकेको बताउँछन्। समाधानको खोजीमा उनी मनोचिकित्सककहाँ पनि पुगे। तर, एक्लै गएर के गर्नू ? श्रीमतीलाई चिकित्सकसम्म पुर्‍याउन सक्दैनन्। भन्छन्, “अंश माग्ने र छुट्टएिर बस्छु भन्ने, सम्बन्ध सुधारका कुरा गर्नै नचाहने। दुःख दिनुको पनि हद हुन्छ !”
एकदिन खबरै नगरी साँझ ४ बजेको उडानमा काठमाडौँ झर्दा आफू बसेको अपार्टमेन्टमा भेटिए, श्रीमतीका हाकिम। त्यसपछि श्रीमतीले आफूलाई बेवास्ता र घृणा गर्नुको कारण थाहा पाए उनले। अहिले उनलाई दुई वर्षकी निर्दोष छोरीको भविष्य र दुःख गरी कमाएको सम्पत्तिको चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ। तर, श्रीमतीलाई भने श्रीमान्को कुनै मतलब छैन। आफ्नै धुनमा अफिस, घुमघाम गर्छिन्। छोरीलाई शिशु स्याहार केन्द्रमा राखेकी छन्। श्रीमान्ले सम्झाउने प्रयास वा गुनासो गर्दा ‘म जेसुकै गरूँ, तिमी आफ्नो सुर गर’ भन्छिन्।
मनोपरामर्शकर्ता गंगा पाठकका अनुसार, यसरी परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्नेको संख्यामा पनि वृद्धि भइरहेको छ। बाहिर सम्बन्ध भएपछि घरमा श्रीमान्लाई बेवास्ता र घृणा गर्न थाल्छन्। पाठक भन्छिन्, “वैवाहिक जीवनको द्वन्द्व सुरु हुने क्रममा समाधान खोज्न विभिन्न परामर्श केन्द्र पुग्ने जोडीमध्ये यसरी पुरुषहरू महिलाबाट पीडित भएका घटनाहरू उल्लेख्य मात्रामा देखिन थालेका छन्।” त्यहाँ पुग्ने जोडीका एकअर्काविरुद्ध गुनासा र बयान सुन्दै जाँदा थाहा हुन्छ, पुरुष पनि महिला हिंसाको सिकार भइरहेका छन्।
कार्यालयकै सहकर्मीसँग पूर्वसम्बन्ध भएका महिलाका श्रीमान्हरू पनि पीडित हुन्छन्। नयाँसँग सम्पूर्ण रूपमा समर्पित हुन सकिरहेको हुँदैन, पूर्वप्रेमी बारम्बार आँखाअघि हुँदा, धेरै समय सँगै रहँदा सन्तुलन कायम राख्नै गाह्रो हुन्छ। मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार, बाहिर प्रेमी हुने महिलाले व्यक्त वा अव्यक्त रूपमा उसलाई आफ्नो श्रीमान्सँग तुलना गर्छन्। “प्रेमीले घुमाउन लैजान्छ, रेस्टुराँमा खान बोलाउँछ, गिफ्ट दिन्छ तर श्रीमान्ले यति नगर्न सक्छ,” पाठक भन्छिन्, “आफ्नै त हो नि भनेर श्रीमतीलाई रभिmाइरहनुपरेन। अनि, आफ्नो श्रीमान्लाई हरेक शब्दमा अपमानित गर्ने, झर्किने, आलोचना गर्ने, असहयोग गर्ने हुन्छ।”
श्रीमतीबाट प्रताडित हुने पुरुषहरूका दुःख मानसिक-शारीरकि यातनामा मात्रै सीमित छैनन्। आफैँ वा अन्य व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर श्रीमान्को हत्या गर्नेसम्मका घटना पनि देखिएका छन्। गत ८ साउनमा काठमाडौँको मासां गल्लीमा ग्राहकका रूपमा आएका युवकहरूले व्यापारी कृष्ण श्रेष्ठको हत्या गरे भने श्रीमती सीता सामान्य घाइते भइन्। पछि प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्यो, श्रीमतीकै योजनामा उक्त घटना भएको। प्रहरीले हत्यामा श्रीमतीको हात रहेको दाबीसहित काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर
घरेलु हिंसा अन्तर्गत श्रीमतीले श्रीमान्माथि गर्ने हिंसा’bout स्पष्ट अध्ययन भएको छैन। दक्षिण एसियाको तथ्यांक हेर्ने हो भने अधिवक्ता अर्यालकै दाबी आसपासमा पुरुषहरू महिलाद्वारा गरनिे हिंसाका सिकार भइरहेका छन्। भारतमा दुई वर्षअघि सोसियल मुभमेन्ट नामक संस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार कुल घरेलु हिंसामध्ये ३४ प्रतिशत हिंसा पुरुषमाथि भइरहेको छ। अध्ययनमा श्रीमतीले श्रीमान्लगायत उसका नातेदार, साथीभाइ, इष्टमित्रलाई गर्ने अनादर र अशिष्ट व्यवहारलाई समेत हिंसाको कोटिमा राखिएको थियो। श्रीमान् रहेको ठाउँ, बाटोघाटो वा कार्यालयमा गएर अपशब्द प्रयोग गर्ने, कुटपिट गर्ने, सञ्चारमाध्यम वा कुनै प्रकारले सताउने, मानसिक तनाव दिने, श्रीमान्लाई भेटघाटमा रोक लगाउने, अनादरपूर्वक नाम लिनेजस्ता व्यवहार पनि पुरुष हिंसाभित्र राखेर हेरएिको थियो।
नेपालस्िथत अमेरकिी दूताबासको उच्च तहमा काम गर्ने एक पुरुष अहिले यस्तै अवस्थामा पुगेका छन्। ती पुरुषले चार वर्ष इजरायल बसेर केही समयअघि आएकी श्रीमतीसँग चार दिन पनि राम्रोसँग बिताउन पाएनन्। “यसरी टाढाटाढा कति दिन बस्नू ? दूताबासले मलाई दिने तलब पनि राम्रै छ। यतै काम खोजौँला,” उनले भने। तर, श्रीमती बस्न मानिनन्। अब श्रीमती नफर्किने संकेत उनले पाएका छन्। श्रीमतीका नाममा रहेको जग्गा रोक्काका लागि उनले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन पनि दिएका छन्। “कति दिन आशैआशमा बस्नू ? हाम्रो दाम्पत्यको के अर्थ रह्यो र !,” उनी भन्छन्, “उनले छाडेर गएकी सात वर्षकी छोरी १२ वर्षकी भई। साँझबिहान आमाआमा भन्छे।” असहाय बाल्यकाल बिताएका उनी आफ्नो सुखदुःखमा साथ दिने आशमा आफूजस्तै टुहुरीसँग बिहे गरेका थिए। तर, उनी श्रीमतीबाट उपेक्षा, मानसिक यातनाबाहेक केही नपाएको भन्दै दुःख सुनाउँछन्।
नेपाल टेलिकमका कांग्रेसनिकट कर्मचारीहरूको संगठनका एक पदाधिकारीले भोगेको पीडा यहाँ सान्दर्भिक देखिन्छ। उनकी श्रीमती काठमाडौँका एक साधु, जसले आफूलाई ‘गुरुबा’ भनेर चिनाउँथे, कहाँ अधिकांश समय बिताउन थालिन्। कतिसम्म भने घरमा सासू बितेर श्रीमान् काजकिरयिामा बस्दासमेत श्रीमतीले घरव्यवहार हेरनिन्। गुरुबाले ‘तेरो श्रीमान्ले बाहिर अर्कै श्रीमती राखेको’ भनेकै भरमा चार वर्षदेखि आफूलाई प्रताडित बनाएको काठमाडौँ प्रशासनमा दिएको उजुरीमा उल्लेख छ। मानसिक पीडा, छोराछोरीको भविष्य र श्रीमतीका नाममा रहेको अचल सम्पत्ति गुम्ने डरले हैरान भएपछि प्रशासनको शरणमा पुगेको उनको उजुरीमा उल्लेख छ।
समाजशास्त्रीहरूका अनुसार, महिला सशक्तीकरण, पुरुष हैकमविरोधी विश्वव्यापी अभियान, राजनीतिक प्रणालीको फेरबदललगायतका कारणले पुरुषप्रधान समाजमा शक्ति सन्तुलन खल्बलिँदै गएको छ। यसले महिलालगायत हिजोका थुप्रै शक्तिहीन समूह/वर्गका हातमा शक्ति पुगेको छ र त्यसको दुरूपयोग पनि सँगसँगै देखिन थालेको छ। यही क्रममा महिलाले पुरुषलाई सताउने, यातना दिने र हिंसापूर्ण व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको समाजशास्त्रीहरू बताउँछन्। लैंगिक समानतासम्बन्धी कार्यक्रममा परामर्शदातृका रूपमा लामो समय काम गरेकी होमा थकाली भन्छिन्, “शक्ति आगोजस्तै हो। ठीक्क भए न्यानो हुन्छ, बढी भए पोल्न थाल्छ।” कसैलाई नपोल्ने गरी शक्तिको वितरण गर्नका लागि सन्तुलित नारा, नीति र कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनी बताउँछिन्। तर, के त्यस्तो नारा, नीति र कार्यक्रम सम्भव छ, जसबाट सुरुमा उल्लेख गरएिका काठमाडौँका राणा थरका युवकजस्ता महिला हिंसाका सिकार भएकाहरूले न्याय पाउन सकून् ?
2 responses to “बिचरा पत्नीपीडितहरु !”
जनवरी 2, 2011 at 7:26 बिहान
thika parechan, yasai garnu parcha, sampatiko ghamanda ra puruspradhan bhanera ganiyara narilai nokar ra dasi ko rupma chinauni, samajlai, laj lagenacha tyati bhanna, aphule je gare pani huni narile kehi garni jigyasa garda tyaslai hatosahit banauni, nirutsahit banauni, banko baghle bhanda manko baghle pahila khayo bhaneko yahiho.
पिंगब्याक: http://agniba… « bcpandit